18 ka musharax ee ee u tartamaya madaxtooyada Soomaaliya ee doorashada ugu horeysay tan iyo 1984 - iftineducation.com
iftineducation.com – Siddeed iyo toban musharaxiinta ayaa la xaqiijiyay ee u tartami doonaa doorashada taariikhiga ah ee madaxtinimada dalka , markii ugu horeysay tan 1984.
Dalka Soomaaliya ayaa ka dhacday doorashada madaxweynaha dadban ee 2012 si loo dhiso dowladda federaalka ugu horeysay ka dib in ka badan 20-sano oo siyaasad maran.
Doorashada sanadkan waxa, la qorsheeyey in la qabto bisha November 30 keeda, iyadoo sharcidajiyayaasha la doortay ee xubnaha ka mid ah labada Aqal ee Baarlamaanka ay dooran doonaan madaxweynaha.
Iyada oo doorashada guud oo shacabka uu codeeyo aan weli suurtagal aheen Soomaaliya, 14.025 wakiilada qabiilada oo qeyb ka ah ergada Doorashooyinka ayaa dooranaya 275 xubnood oo ka tirsan Aqalka Hoose ee Baarlamaanka halka baarlamaanada gobolka dooranayaan 54 xubnood oo ka tirsan Aqalka Sare.
Xubnaha ka mid ah labada aqal ayaa u codeeynaya Madaxweynaha si waafaqsan Dastuurka Federaalka Ku-meelgaarka ah.
Waxaa ka mid ah musharaxiinta madaxtinimada Madaxweynaha xilka haya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Faadumo Dayib, mid ka mid ah Labada Dumarka ee u tartamaya madaxweynaha dalka kuwa oo wajahaya hanjabaadaha kooxda Islaamiga ee al-Shabaab.
Nag buran qaabka lawasayo